Ukhenketho lwefektri - TMTeck Instrument Co., Ltd.
Siqinisekisa ukubonelela ngemveliso yodidi lokuqala kunye nemveliso yasekuqaleni kunye nokupakishwa. Sithobela ngokungqongqo iimfuno zemigangatho yobungcali, zonke iinkqubo zilawulwa kwaye zibekwe iliso kumgangatho ofanayo wokuqinisekisa umgangatho ophezulu weemveliso.
Nayiphi na imibuzo malunga nomgangatho, sinokukunika isatifikethi somthombo wemveliso, kwiimfuno ezizodwa zabathengi, sinokuqhuba iimvavanyo zaselebhu ngokubanzi.
Ukusebenzisana nomgangatho kunye neziko lobuchule lolawulo lobuchwephesha, sisebenzisa izixhobo zovavanyo eziphambili kakhulu nezisebenzayo, zonke iimveliso zigqithile kwiinkqubo zokuvavanya ngokungqongqo ukuqinisekisa ukuzinza kwemveliso kunye nokuhambelana. Sineenkqubo zolawulo lomgangatho zenzululwazi kunye nezobungqongqo, ngokuhambelana nayo yonke imigangatho efanelekileyo yeshishini nakwamanye amazwe
Ngokutsho amashishini ezahlukeneyo kunye neemfuno ezizodwa loMthengi, singakwazi ukunika iinkonzo elicwangcisiweyo kunye nohlalutyo ibango lobungcali kunye nomsebenzi kuyilo ezintsha ukuhlangabezana neemfuno zakho ezizodwa. I-TMTeck njengamalungu ekomiti yokumiselwa komgangatho kushishino lwe-NDT, ithatha inxaxheba ngokubonakalayo kuqulunqo lwemigangatho yemizi-mveliso, uhlaziyo kunye nokuyilwa kwemigangatho yoshishino efanelekileyo. ukwenza igalelo elifanelekileyo kuphuhliso lweshishini le-NDT. Okwangoku, iimveliso ze-TMTeck ziye zacetyiswa ukuba zibe yikomidi yovavanyo yesizwe kunye noqeqesho lukazwelonke lwenkqubo yovavanyo, iye yasetyenziswa ngokubanzi kwimveliso, kwimveliso, kwinkqubo yolawulo lomgangatho we-thermal, inqanawa yoxinzelelo, inqwelomoya, i-aerospace, amandla ombane, ipetroleum, imichiza, Umbhobho, ishishini lezomkhosi, ishishini lenyukliya, inqanawa, imoto, isinyithi, ubume bentsimbi, uloliwe, eyunivesithi, idlale indima ebalulekileyo ekukhuthazeni uphuhliso olukhawulezayo lwetekhnoloji ye-NDT kunye nomgangatho weemveliso zorhwebo, iqinisekisa umsebenzi wokhuseleko kwimveliso yezorhwebo kunye nokunciphisa umngcipheko worhwebo.TMTeck zingenza izixhobo njengoko abathengi befuna.do inkonzo ye-OEM / ODM.
I-TMTeck inobuchwephesha bemveliso egqibeleleyo, iindlela zovavanyo ezigqibeleleyo kunye namandla e-R & D. Ukusuka kwisixhobo esiphathwayo se-NDT ukuya kwinkqubo enkulu yokufumanisa ngokuzenzekelayo, i-TMTeck inamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, amalungelo abenzi kunye namalungelo obunini besoftware. Iimveliso zanikwa isihloko seemveliso ezintsha ezizimeleyo. I-TMTeck isebenzisa imigangatho yesayensi ukulawula inkqubo yemveliso, ukusuka kwi-R & D ukuya kwimveliso, zonke iimveliso zihambelana ngokupheleleyo ne-ISO9001, icandelo ngalinye kunye nesixhobo siya kudlula ukuhlolwa okungqongqo kunye neemvavanyo ngaphambi kokuhanjiswa, ukudityaniswa kwezixhobo kunye nokulungisa ingxaki kuya kuba ngokuhambelana ngokupheleleyo nenkqubo esemgangathweni kunye neenkcukacha zokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Umgangatho kunye nokusebenza kweemveliso ze-TMTeck zifikelele kwinqanaba eliphambili kushishino. Iimveliso ze-TMTeck zidlulile kwizatifikethi ezininzi zobuchwephesha ezinje ngesiqinisekiso se-EU CE, isiqinisekiso seROST saseRussia, ngokuhambelana ngokupheleleyo nemigangatho yoshishino efanelekileyo.
Iibhloko zokuLungisa iiPayipi, Iintambo ze-Ultrasonic Transducer, Iibhloko zokuLungisa, Uvavanyo lweBhloko yoVavanyo, Uvavanyo lweBhloko, Ulungiso lwee-Ultrasonic,